မွေးနေ့ မင်္ဂလာ ပါ ချမ်းငြိမ်းဖြူ(ခ)ဂျစ်တူး(ခ)ခြူး(ခ)အရိုး ရေ…… | Mg Ogga's Notes
မွေးနေ့ မင်္ဂလာ ပါ ချမ်းငြိမ်းဖြူ(ခ)ဂျစ်တူး(ခ)ခြူး(ခ)အရိုး ရေ……
သူကား ကလေးများကို ပုံပြောနေသော ပုံပြောသူ တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။
ဂျာနယ်တစ်ခုမှာ ကလောင်စွမ်း လစဉ်ပြနိုင်သော စတုတ္တမဏ္ဍိုင်ကြီးလည်း ဖြစ်တယ်။
သူမှာ သွေးမတော် သားမစပ် အစ်ကိုများစွာရှိတယ်
သူမှာ သွေးမတော် သားမစမ် အစ်မ များစွာရှိတယ်
သူမှာ သွေးမတော် သားမစပ် ညီမ များစွာရှိတယ်
သူမှာ သွေးမတော် သားမစပ် မောင် များစွာရှိတယ်
သူဟာ ကြီးတော်နွားကျောင်းရတဲ့ ပရဟိတ အလုပ်ကို နှစ်သက်တယ်။ ပုံပြောသူများက နာမည်ကျော် ငပေါကြီး များနဲ့ အပြိုင် ယှဉ်ပြိုင် ပေါ ရဲ သူလည်း ဖြစ်တယ်။ ကော်ကိုင်း မျက်မှန်အမဲ ကြီးကို မလှမပတပ်ဆင်ထားပြီး ယမ်ယမ်ခေါက်ဆွဲ ဆံပင်ဖွားဖွားဖြင့် ရွာရိုးကိုး ပေါက် ဆက်ထောက် ဆက်ထောက် လျောက်နေသူ ဖြစ်တယ်။ စတာနောက်တာ စိတ်ဆိုး ရင် အားပြဲကြီးနဲ့ ငိုတတ်သူ တွေ့ရာနဲ့ ကောက်ပေါက်သူဖြစ်တယ် ။ ဂျာနယ်တစ်စောင်ပေါ် ကလောင်စွမ်းနဲ့ တောင်ရမ်း မြောက်ရမ်း ရမ်းတတ်သူဖြစ်တယ်။
ထိုသူကို အိမ်ကခေါ်သည်ကား ခြုး သူငယ်ချင်းတွေ ခေါ်တာက အရိုး သူကိုယ်သူ ပေးတဲ့ နာမည်က ဂျစ်တူး နာမည်အရင်းကား ချမ်းငြိမ်းဖြူတဲ့။
မွေးနေ့ ဟာ ကိုယ်ဘာသာကိုယ် ကျင်းပ ရတာ မဟုတ် သူများက ကျင်းပပေးရတာလို့ ထင်တယ်။ ဒီလူတစ်ယောက် မွေးဖွားလာတာ ကို ကျေးဇူးတင်တဲ့ အနေနဲ့ ကျင်းပပေးရတာပါ။ အခု ကျနော်တို့ ရဲ့ ရဲဘော်ရဲဘက်လည်း ဟုတ်တယ်။ သွေးမတော်သားမစပ် ညီမအရင်းလည်း ဟုတ်တဲ့ သူ မွေးဖွားလာတာ ၂၃ နှစ်ပြည်ခဲ့ပြီ။
သူသည် ပုံပြောသူများကို တည်ထောင်ခဲ့သူတစ်ယောက် ပုံပြောသူများကို ဦးဆောင်ခဲ့သူတစ်ယောက် ဒီအချက်နဲ့ တင် သူ မွေးဖွားလာတာကို ကျေးဇူတင်ထိုက်တယ်။ သူမွေးဖွားလာတာ ကို ကျေးဇူးတင် ပါတယ်။
နတ်တော်လဆန်း ၉ ရက်နေ့ ၁၃၇၃ ခုနှစ်
၂၃နာရီ ၁၀ မိနစ်
June 27, 2013 in မွေးနေ့ဆုတောင်း လက်ဆောင်. Tags: chu
24 နှစ်ပြည် ဂျစ်တူး အတွက်မွေးနေ့ အမှတ်တရ
← ဘယ်ဟာ အဓိကလဲ
အစည်းဝေးတစ်ခု ဘယ်လိုလုပ်မလဲ? →